Braga si jam na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na maka maka ọnwa - ntụziaka site n'oge ochie, fermented na mgbu jam
Braga si jam - ụzọ kachasị mma isi mee ka ihe oriri na-aba n'anya na-eme n'ụlọ
A ga-eme nkwadebe nke moonshine nke ọma n'ụlọ, iji detụ ya ire agaghị adị njọ karịa ngwaahịa ahụ a zụrụ, ebe ọnụahịa maka okwu ụlọ dị nnọọ ala. Ọtụtụ mgbe a kwadebere ma na-aṅụ mmanya na-aṅụ si jam, bụ nke kwesịrị ekwesị maka oriri na ụdị ya dị ọcha. The billet nwere ike igosi ụtọ mkpụrụ osisi ekpomeekpo, na mgbakwunye, o nwereworị shuga dị mkpa.
Kedu otu esi eme mkpọtụ nke jam?
Ihe ọṅụṅụ mbụ ahụ ga-enye aka mee mkpọtụ jam, mgbe ọ na-esi nri ya kwesịrị iburu n'uche oge dị otú a:
I kwesiri inwe nchegbu gbasara mmiri mmiri. Nhọrọ zuru okè ga - abụ mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri dị mma. Ọ bụrụ na iwere mmiri, ọ ga-aka mma ka ọ nọrọ maka otu ụbọchị, nke mere na adịghị emerụ ala ahụ. Ị nwere ike ihicha mmiri ahụ ma ọ bụ nsị nri, mana anaghị esi esi mmiri.
Braga ga-adị njikere mgbe ụfụfụ ngwa ngwa na-amalite ịmalite, na uto ahụ ga-enwe ekpokpo ọkụ dị ọkụ. Nke a pụtara na nsị lactic acid malitere.
Mgbe mmiri ahụ na-akwụsị, a naghị akwado mmanya ahụ maka oriri, a na-edozi ya ma tinye ya na mmiri.
Na-echekwa nza n'ime friji ahụ n'ọnọdụ dị nro.
Mgbe a na-akwadebe brews site na jam, ọkpụkpụ bụ otu n'ime isi ihe ndị ahụ. Iji kwadebe, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
Agba ochie na-agbanye na mmiri ọkụ n'otu nha 1: 3.
Site na mmiri na-eme ka mmiri ghara ịdị na-edozi mmiri dị ọcha.
Gbakwunye yist achịcha n'ogo 30 grams kwa 1 n'arọ nke jam.
Ntụziaka braga si jam na yist
Ọ bụrụ na enwere ọchịchọ ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-adịghị ahụkebe na obere ume, mgbe ahụ, usoro nchịkọta dị mfe maka isi wort ga-eme. N'ụzọ dị otú a, a na-akwadebe nkwanye maka jam na yist anụ. Akụkụ ikpeazụ ga-eme ka ụdị mmanya a dị ka kvass, nke mere na a ga-enwe ekele na oge okpomọkụ. Ọ bụrụ na braga na-abụ nkwadebe maka maka ọnwa, mgbe ahụ, ihe dị ka 1.5 n'arọ shuga ka ekwesiri itinye na components.
ochie jam - 3 lita;
okpukpu kporo - 25 g;
mmiri -15 l.
Mmiri na-ekpo ọkụ, kpụ ọkụ n'ọnụ ruo ogo 30 na-ebelata jam.
Tinye yist ahụ a tụgharịrị.
Wunye ngwakọta n'elu ihe ndị ahụ ma tinye ya na ebe dị ọkụ. Tinye roba uwe n'olu. Nye ya ruo mgbe ogwe aka dara.
Akwụsị nke ọma na jam kwesịrị ịka njọ.
Kedu otu esi eme mkpọtụ site na jam ochie?
N'ihe nhazi mbụ, a na-agbanye biya na mmanya na-aba n'anya, nke mere na ọ na-amalite ịsị ya n'ụzọ nkịtị, ya bụ, n'ihi ọnụnọ biya bara uru n'ime ya. Na mgbakwunye nke akụrụngwa a, a kwadebere nkwonkwo site na jam ochie ahụ. Ọ na-ewe ọtụtụ oge obere iji esi nri karịa nhazi na ihe iko achịcha na mịrị. Ị nwere ike iji utu ma ọ bụ mkpụrụ osisi strawberry.
biya biya - 500 ml;
shuga - 1, 5 lita;
mmiri - 10 lita.
Gwakọta ihe niile. Jiri mmiri dị ṅara ṅara ha mmiri ma wụba n'ime karama mmiri.
Na-aṅụ ka ị nọgide na-ekpo ọkụ n'otu izu.
Braga si jam jam
Site na ihe ndi ozo, kwa, i nwere ike kwadebe ihe ọṅụṅụ, dika ima atu, uto nke mbu bu ihe ndi ozo bu ihe ndi na-eme ka ihe di nma. Otu isi ihe dị mkpa, nke a ghaghị iburu n'obi, bụ iji hụ na o kwesịrị ekwesị mgbe ị na-agbakwunye yist, a ghaghị iji ya mee ihe n'ụzọ doro anya.
mgbu jam - 2 n'arọ;
mmiri - 6 l;
yist - 50 g;
sugar -1 n'arọ.
Ghọta jam na mmiri ọkụ.
Tinye ọkara nke yist na shuga.
Ghichaa akpa ahụ na ákwà na-ekpo ọkụ na-esi ọnwụ ruo mgbe njedebe nke gbaa ụka.
Ntụziaka braga si jam na-agwụ na ya percolation.
A pụkwara iji owuwe ihe ubi Prokissheuyu nweta uru, na ndabere ya na-akwadebe nkwado si jam maka moonshine . Akụkụ ọzọ nke na enyere usoro ahụ bụ mịrị. Ntughari mmiri ga-adịgide ruo ọnwa 1-3, ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ agaghị agbanwe agbanwe, ma nọrọ n'agbata afọ 18 na 20. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ike nke ihe ọṅụṅụ, a na-agbakwunye ya shuga dị ntakịrị.
Mmiri uto - 2 lita;
mkpụrụ vaịn mịrị - 100 g.
Na karama ahụ, wụsa na ihe ngwọta nke mmiri ọkụ na jam, gbakwunye mịrị, ma na-ahapụ ihe dị ka ¼ nke kalama ahụ na-efu.
A ga-emechi akpa ahụ na akwa hydraulic pụrụ iche ma ọ bụ tinye ya na oghere roba na oghere dị n'akụkụ mkpịsị aka.
Kwụsị akpa ahụ ruo mgbe ịgba ụka zuru ezu.
Bido ime ihe a ma tinye ebe dị jụụ n'izu ọzọ.
Braga si ochie compote na jam
A tọrọ ụtọ ihe ọṅụṅụ si brega si compote na jam. N'ihe nhazi a, a ga-achọkwa nchịkwa, nke ga-emezigharị usoro ịgba ụka ahụ. Otu akụkụ pụrụ iche nke usoro nri a bụ na ọ bụghị naanị mmiri, kama ọ na-ejikwa compote dị ka mmiri mmiri na-atụgharị mmiri, ya mere, ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya na-eme ka ọ dịkwuo ibu.
mmiri ọkụ - 15 lita;
okpukpu kporo - 15 g.
Jam na-atụgharị na mmiri ọkụ na compote.
Wepụ iche yist ahụ n'ụzọ dị iche ma tinye ebe dị ọkụ ka ịmalite nsị.
Mgbe egosipụta, ị nwere ike wụsa yist achicha n'ime jam.
A na-edebe Braga site na jam ochie ka ọ nọrọ n'ebe dị ọkụ ruo ọtụtụ ụbọchị, mgbe ọ ghachara idozi ya.
Braga si jam na-enweghị shuga
Maka ndị na-enwe mmasị ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'ụlọ, usoro nchịkọta maka burgers si jam maka moonshine ga-aba uru. Maka ya, ị nwere ike ịhọrọ jam ọ bụla: cherry, strawberry, utu ma ọ bụ apụl. Iji zere shuga kpamkpam, jam kwesịrị inwe ihe dị ka ọkara nke onye na-esi ísì ụtọ. Maka uto mara mma, ị nwere ike ịgbakwunye ntakịrị vanillin.
ochie jam - 6 lita;
mmiri - 15 lita;
ihe iko achịcha - 250 g.
Na mmiri ọkụ, wụsa jam na mix ọma.
A na-eme ka yist tụgharịa na mmiri ọkụ, nye ihe dịka minit 10.
Tinye yist ahụ n'ime ụra ma na-esi ọnwụ na okpomọkụ ruo ihe dịka izu abụọ.
Tupu erie nri, a na-esizi distilled samogon brew si jam ochie.
Braga mere jam
Na-aṅụ ihe na-enweghị ike ikwu piquant uto nwere ike nweta ma ọ bụrụ na ị na-eji uzommeputa burgers si jam jam. Ọdịiche ya bụ ịmata mmemme dị otú ahụ dị ka ịmalite ikpo ọkụ na ịgbakwunye ihe iko achịcha. Mgbe njedebe nke gbaa ụka, a na-esi na sedimenti dozie uka ahụ na ezigbo sieve ma ọ bụ rọba roba.
icha iko - 1 ngwugwu;
mịrị - 100 g.
Tinye jam n'ime ite ma wụsa mmiri oyi. Wunye mịrị. Hụ nchịkọta ahụ.
Mee ihe na-eko achịcha: na mmiri ọkụ na-atụgharị yist ruo mgbe homogeneity. Mgbe ị gụchara wort ahụ, wụsa ihe iko achịcha ahụ.
Wụnye akara mmiri ma tinye ya n'ebe dị ọkụ.
Braga site na jam na ụlọ kwesịrị ịgbatị ruo ụbọchị 8-15, a ga-agwakọta ya kwa ụbọchị.
Kedu esi mee ka a na-etu ọnụ site na apple jam?
Otu mgbanwe dị iche iche nke ihe ọṅụṅụ a bụ nkata ndị a na-eme site na apple jam . Akụkụ a nwere ike inye ezigbo uto ọgaranya, na ndabere ya ị nwere ike ịkwadebe ma ọ bụ mụọ. Usoro ịmepụta mmanya na-aba n'anya n'ụlọ dị mfe ma bụrụ onye na-amalite.
apụl jam - 3 lita;
Kpoo mmiri na jam. Tinye yist ahụ a tụgharịrị.
Wunye ngwakọta ahụ n'ime akpa ma tinye ya na ebe ọkụ. Tinye roba uwe n'olu. Nọgide ruo mgbe ọ daa.
Nwee obi ike.
Kedu ka esi mee ka ibe gị belata?
Mgbe ị na-ehichapụ ụyọkọ si jam, ihe yist nwere ihe dị iche iche na-ere ọkụ mgbe ọ na-ekpuchi ma na-edetụ anụ ọkụ ọkụ, nke gosipụtara na ihe ọṅụṅụ ahụ n'onwe ya. Ya mere, ị nwere ike ịchọta ụzọ dị iche iche nke ntụgharị uche:
E wepụrụ ntupu site na ịma jijiji na - akpata ya;
nkọwa doro anya na-adabere site n'ịfri ihe ọṅụṅụ ahụ;
a na-eji bentonite mee ihe na 1 tsp. na 0, 5 lita nke ihe ọṅụṅụ na ngwakọta na-etinye maka ihe dị ka 4 awa;
eji tii tarade (kwa 10 lita nke ihe ọṅụṅụ 70 grams tii);
mgbakwunye nke citric acid (kwa 10 lita nke brewing mmanya 1 tbsp.);
nkowa na gelatin;
nkowa nke soda, manganese;
nhichapu ihe ọṅụṅụ site na ihe ruru site na carbon;
nkowa nke ime biya na mmanya.
Home Tarch - uzommeputa
Kọfị na cognac
Mmanya si jam - ihe kachasị mma maka ịṅụ mmanya n'ụlọ
Kvass na ihe iko achịcha nke rye ntụ ọka
Compote nke strawberries frozen
Mandarin tincture na vodka
Mmetụta nke deja vu
Sepengeti National Park
Streptoderma - mgbaàmà
Agbamakwụkwọ Uwe 2018 - ejiji ejiji, novelties, na ọnọdụ
Dermoid ovarian cyst - akpata
Pisa - ebe nkiri
Ngwá ọkụ maka ịkụ ubi
Aha maka agha
Nri na mmiri ara ehi
Ihe dị na calorie nke banana
Ngwá ọka jelii n'ụlọ
Achịcha na apricots na otutu
Katidral nke Lady anyị nke Mmeri
French na-egbuke egbuke
Gịnị mere nwamba ji hụ valerian n'anya?